'INTSHA' I-Hut yoMalusi oMfihlo, uLoch Ken
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguRaewyn
Indlwana entle ‘engekho kwigridi’ yabelusi ababini (ilala ukuya kuthi ga kwisithathu esinebhedi elingana nenkosi kunye nebhedi encinci eyodwa), kwindawo epholileyo eselunxwemeni lweLoch Ken engonakaliswanga, e-SW Scotland.
Yonwabela ulonwabo olulula lokucotha ukuhlala kwi-eco friendly hut yethu, chitha ubusuku ngokuhlwa ubukele ilanga litshona phezu kwe-loch ukusuka kwi-decking okanye ujikeleze umgodi womlilo wangaphandle kumda we-loch. indawo apho unokujonga inkwenkwezi phantsi kwesibhakabhaka sethu esimnyama.
Indlwana yethu yabelusi ibekwe elunxwemeni lweLoch Ken, enembono phezu kweGalloway Forest park kwindawo ekhethekileyo ye-UNESCO biosphere kunye nesibhakabhaka esimnyama indawo. Sinikezela ngekhefu kwihlabathi elixakekileyo, kodwa sinokulungiselela abo banomdla ngakumbi, kunye ne-marina yemidlalo yasemanzini kunye neziko le-galloway ye-galloway umgama nje weemayile. Yonwabela ilanga langokuhlwa ukusuka kwicala le-decking okanye kwi-loch, kunye nezilwanyana zasendle ukuze uzibone - i-heron, amadada asendle, amaxhama, ii-hedgehogs, ii-squirrels ezibomvu, izikhova, ii-otters (ekuseni kunye nongcwalazi ukuba unethamsanqa!) kunye neekhati ezibomvu ukukhankanya ezimbalwa. Ngaphakathi, isitovu sethu sesisu sembiza asikugcini nje ukuzothe kodwa singasetyenziselwa ukupheka-sebenzisa umphezulu njengepleyiti eshushu ukwenza ikomityi yekofu igqibeleleyo kwimbiza yekofu enikiweyo. Ngeentsuku ezifudumeleyo kukho umgodi womlilo wangaphandle ecaleni kwendlwana okanye ukhanyise lowo uphantsi kungqameko lwamanzi (olunye ukhetho lokupheka lubandakanya i-charcoal bbq, i-gas camping ring okanye ukonwabela isidlo kwimbasa ephumelele ibhaso Clachan Inn 5 miles away). Njengoko ubusuku bungena ungakhanyisa isitovu, vala izivalo kwaye ukhwele kwibhedi enkulu epholileyo yenkosi (ene-mattress topper kunye nelinen yebhedi emhlophe qhwa). Ekuseni ukonwabela ubuxoki-ngaphakathi, funda okanye uthathe iimbono zeloch kunye nazo zonke izilwanyana zasendle ngaphandle kokuba uphume ebhedini! Kukho amanzi ashushu nabandayo ahambayo, isinki encinci yaseBelfast (amanzi ampontshelwa kwindlwana kunye neshawari esebenzisa amandla aphuma kwipaneli yelanga) izitulo, itafile, izitya ze-enamel kunye nazo zonke izixhobo zakho zokupheka ezibalulekileyo ezibonelelwe ngaphakathi kwendlwana. Zama isandla sakho kwindawo yokuhlala enobuhlobo kunye ne-rustic kunye ne-eco composting yangasese (isitayela se-woohoo sobutofotofo ukuze kungabikho vumba okanye ukwahlula kuyafuneka) kunye neshawara yamanzi ashushu ashushu ebekwe kwindawo ekude yeemitha ukuya kwindawo yabucala, kodwa ingekude kakhulu ukuba ungandwendwela. ezinzulwini zobusuku. (Okanye isibindi sinokufuna nje ukuhlamba kwilokhi phantsi kweenkwenkwezi!)
Sisebenzisa i-Eco friendly kwaye akukho mbane (ziza nebhetri yakho, i-4G iyafumaneka ukuba uyayifuna). Sibonelela ngamanzi okusela asebhotileni, ubisi, iti, ikofu, itshokolethi eshushu, iswekile, ityuwa kunye nepepile kunye neevenkile zasezilalini ezigcwele kakuhle eziseBalmaclellan (iikhilomitha ezi-4 kude), iNew Galloway kunye neDalry. Siyayixhasa imilinganiselo yokuziphatha yenkampu yasendle ngomgaqo-nkqubo othi ‘ungashiyi umkhondo’ (nceda ususe inkunkuma yakho kwaye usebenzise amanzi ngononophelo).
Ukuba unomdla okanye unqwenela ukubaleka... bhukisha ukuhlala kwakho nathi ngoku!
-i-bbq inikezelwe (zisa owakho amalahle)
- ilinen yebhedi, iitawuli kunye neebhotile zamanzi ashushu zinikezelwe
-Imbiza yeVeer yangaphandle ukunceda ukugcina ibhokisi encinci yobisi okanye ibhotile yakho yewayini ipholile ngobusuku
- ukuloba simahla
-Iindawo zokuphumla zelanga ezimbini ezibekwe elunxwemeni lweloch kunye nomgodi osecaleni womlilo
- iimatshisi ezincomekayo, ukubanjwa kunye nebhegi yezigodo (iingxowa ezongezelelweyo zelogi zisiwe ngentlawulo kodwa kufuneka zi-odolwe ngosuku olungaphambi kokufika)
- Iilitha ezi-5 zamanzi okusela asimahla
- Ukuhlamba i-eco ngolwelo/ilaphu kunye ne-biodegradable Faith kwiNdalo ngesandla kunye neemveliso zeshawari ezinikezelweyo
Nceda uqaphele njengoko siyifama esebenzayo ngoko akukho zinja zivumelekileyo.
- ukuba unqwenela ukwabelana nabanye nge-adventure wamkelekile ukuphathela abantwana okanye abahlobo bakho intente encinci - £10/ ubusuku/ intente encinci. Ezinye iintente ezinobukhulu obunokuxoxwa .
Yiza nentonga yakho yokuloba, ibhodi yokubheqa okanye i-kayak ukundulula elunxwemeni phambi kwendlu yabelusi okanye iibhayisekile ukuze ujonge iindlela ezininzi zomjikelo kule ndawo!
* Nceda uqaphele ukuba abantwana kufuneka babekwe esweni ngamaxesha onke njengoko indawo iselunxwemeni lwelotshi.
* ukusuka nge-1 Nov- 1 April indlu yethu ayifumaneki
Njengesibhakabhaka esiMnyama esamkelweyo kunye ne-UNESCO Biosphere singummandla ongachithwanga, kunye nendlwana yethu yabelusi ibonelela ngesango lokubukela iintaka, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba kunye nemidlalo yasemanzini. Kuninzi okunokuphononongwa kule ndawo kunye nedolophu entle yobugcisa kunye nechweba laseKirkcudbrightshire kunye neelali eziselunxwemeni ezifana neKippford engaphantsi kweekhilomitha ezingama-20. IDrumlanrig kunye neCulzean Castle ziphantsi nje kweeyure zokuqhuba zineendawo zobuhle basekhaya ezinje ngeThreave Castle, iGalloway Forest park/otter pool, ipaki yeFama yase-Ernespie, iCream yeGalloway Ice cream kunye neCarrick Bay zonke ngaphakathi kohambo olufutshane. Imveliso yasekhaya kunye neevenkile zamagcisa zifumaneka kwidolophu entle yentengiso yaseCastle Douglas.I
Iindwendwe ziyakwazi ukupaka kwindawo kwaye zisebenzise inkqubo yokuzijonga. Sihlala kumgama oziikhilomitha kwaye sisoloko siqhagamshelwa ngefowuni okanye nge-imeyile ukuphendula nayiphi na imibuzo engakumbi .